Njirimara, mmalite na mkpa nke hydrosphere | Netwọk Mgbasa Ozi
Anyi aghaghi ima na mmiri bu ihe oke oke ahia ma dikwa mkpa na ndu anyi. Ndị ọkachamara, ndị ọkà mmụta sayensị na onye ọ bụla maara ya. Anyị chọrọ mmiri iji dịrị ndụ. Nke a bụ n'ihi na anyị anaghị eji ya naanị n'ụlọ anyị ị toụ mmiri, ịsa ahụ ma sie nri, mana ọ dị mkpa maka ọrụ ugbo, anụ ụlọ na ụlọ ọrụ. Inwe ezigbo mmiri dị mkpa maka ọha mmadụ na gburugburu ebe obibi. Ya mere, a maara set nke mmiri niile dị na ụwa anyị hydrosphere. Mmiri a na-anakọta mmiri na steeti ya niile: siri ike, mmiri mmiri na alụlụ.
N'isiokwu a, anyị ga-abanye n'ime hydrosphere na mkpa ọ dị maka ụwa.
1 Kedu ihe bụ hydrosphere
2 Mmalite nke hydrosphere
4 Nkesa mmiri n’uwa niile
Kedu ihe bụ hydrosphere
Hydrosphere bu akuku nke biosphere nke nwere mmiri n’elu uwa. Ọ gụnyere mmiri na steeti ya niile ma n’elu ala ma mmiri mmiri. Akpụrụ ahụ na-agbakọba na pola ice caps, n'ugwu ugwu na mmiri nile na-agagharị na ikuku na na osimiri, ọdọ mmiri na n'oké osimiri bụkwa akụkụ nke hydrosphere.
Hydrosphere nwere njiri mara dị mkpa anyị nwere ike ichikọta dị ka:
Ọnụnọ na ngbanwe mgbe niile nke ihe ndị na-eme ka anụ ahụ. Dị ka ihe atụ, a na-eji mmiri ozuzo agbaze ọtụtụ n'ime nkume ndị ahụ wee mepụta usoro ndị dị egwu dịka stalactites na stalagmites.
Ọ na-emekọrịta ihe mgbe niile na Ala jikọrọ ọnụ ma na-agbanwe usoro ahụ. A naghị edozi edozi a mgbe niile, mana ọ na-agbanwe karịa afọ.
Ọ bụ akụkụ bụ isi nke imirikiti ihe ndị e kere eke gburugburu ụwa. Ma na ohia mmiri na mmiri.
Mmiri bụ ihe dị mkpa maka mmalite ndụ ka anyị si mara ya taa.
Naanị ntakịrị mmiri nke mmiri niile dị n'ụwa dabara adaba maka oriri mmadụ na umu ndi ozo. Otú ọ dị, obere pasent ahụ na-akwado onye ọ bụla.
Mmalite nke hydrosphere
N'oge e guzobere ihe ndị dị na mbara ala, mmiri dị n'ụdị mmiri na gas. Mmiri dị na mbara ụwa anyị, na mbido ihe niile, bụ uzuoku. Nke a bụ n'ihi oke okpomọkụ nke chịrị ụwa anyị, na-ekpo ọkụ. Bọọlụ nke ọkụ na-agba ọkụ nke bụ ụwa na mbido ihe niile mere na mmiri enweghị ike ịnọ na steeti ọzọ karịa uzuoku.
Ọ bụ mgbe e mesịrị, mgbe ụwa anyị malitere ịjụ oyi, na enwere ike ịgbanwe ya gaa na mmiri mmiri, na-ebute oke osimiri na oke osimiri nke ụwa niile. Ọ kpọnwụrụ, na-akpụ glaciers na oghere ice. Fọdụ n'ime mmiri ahụ dị na mbara igwe dị ka alụlụ mmiri wee mee ka igwe ojii nwee ike.
Nke a bụ otú e si guzobe mmiri mmiri mbụ. Kaosinadị, anyị maara na mmiri anọgideghị na-agbanwe agbanwe kemgbe ụwa. N'otu aka, ịbụ onye na-agagharị na mgbanwe mgbe niile, anyị nwere ike ịsị na ọ dị na mmiri okirikiri. N'ihi mgbanwe dị iche iche nke mere na ihu igwe kemgbe ọtụtụ afọ, a gbanwewokwa akụkụ nke ice, mmiri mmiri na alụlụ. Nke a emeela ka njirimara nke ala ahụ gbanwee kemgbe ọtụtụ afọ.
Elu ala nke mmiri ahụ bi na ya dịgasị dịgasị iche iche sitere na mbara ụwa. E wezụga mgbanwe nke anụ ahụ na mmiri nke mmiri nwere ike ịnwe, ihe ndị dị ndụ pụtakwara nnukwu mgbanwe maka hydrosphere. Ntinye nke ihe ndi ozo na ngbanwe nke ihe okike emeela ka mmiri gbanwee. Omume ụmụ mmadụ bụ ihe gbanwere oke mmiri, n'ihi na ọ butere mgbanwe na ntinye ya, ịdị ọcha, mmetọ ya na mgbanwe n'ọdịdị ya n'ihi mmụba nke okpomọkụ nke okpomoku zuru ụwa ọnụ kpatara.
Ebe ọ bụ na mmiri kpuchiri n'ihi jụrụ nke ụwa, ọ gbanwere ma gbanwee oge oge.
Anyị ga-enyocha usoro nke hydrosphere site na nkwụsị:
Mmiri siri ike. Akụkụ a nke mmiri mbara ala bụ nke nwere mmiri na mkpanaka, snow na glaciers alpine. A maara n’elu mmiri n’elu mmiri dika “ice floes.” A maara usoro mmiri siri ike dum dịka cryosphere.
Mmiri mmiri mmiri. Mmiri a bụ ihe na-etolite ọdọ mmiri, ọdọ mmiri, osimiri, oké osimiri, oké osimiri, mmiri pọmpụ, mmiri na mmiri mmiri. N’oké osimiri nakwa n’oké osimiri, anyị na-ahụ oké osimiri na oké osimiri. Onu ogugu pere mpe nke mmiri di n'ime ihe di ndu.
Mmiri na a gaseous ala. Ọ bụ mmiri dị n’ọnọdụ alụlụ dị n’ikuku. O nwere ihe mejupụtara ya na ụda ya dabere na ọnọdụ na oge nke afọ anyị nọ na ya.
Nkesa mmiri n’uwa niile
Iji nye gị echiche, hydrosphere nwere mmiri ruru 1,4 puku ijeri km3. A na-ekesa oke mmiri a n'ụzọ ndị a:
97% na oke osimiri na oke osimiri.
2.5% n'ụdị mmiri dị mma.
A na-ekesa 0.5% fọdụrụnụ n'etiti ọnọdụ ndị ọzọ.
Otu n'ime nsogbu bụ isi anyị nwere taa na-enye site mmetọ mmiri site n'aka mmadụ. Site na mmemme akụ na ụba anyị, anyị na-eweda ma wedata ogo mmiri n'ọnọdụ dị mma. O doro anya na mmiri dị ezigbo mkpa enweghị ebe ọ bụla n'ụwa ọzọ. Anyị na-emetọ mmiri dị anyị mkpa ịdị na-emebi.
Dika odi, anyi nwere ikike imeghari mmiri ma belata mmetọ. Anyị nwekwara ike desalinate mmiri si oké osimiri na oké osimiri ime ka ọ ableụọ. Nsogbu nke ihe a niile bụ na ọ na-ebute nnukwu mmefu ike na mmetọ ọzọ na aka nke ọzọ. Anyị kwesịrị ịmara otu mmiri dị mkpa maka mmadụ na ndụ na mbara ụwa.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere hydrosphere na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Mmiri
Ọnwa nke ọnwa